Iiwayini - Chenin Blanc Isilumkiso: Ukusuka Yummy ukuya Yucky
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Iiwayini – Chenin Blanc Isilumkiso: Ukusuka Yummy ukuya Yucky
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Culinary • inkcubeko • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iiwayini kunye neMimoya
iChenin Blanc ngumdiliya ongahoywanga. Ngoba? Kuba kulucelomngeni kune Chardonnay okanye iSauvignon Blanc ukukhulisa nokwenza iwayini. Umdiliya ufuna indibaniselwano ephantse igqibelele yomhlaba kunye nemozulu, kwaye ngumceli mngeni kumenzi wewayini ukulinganisa i-oki kunye nezinye iindlela zokuphucula incasa.
Umdiliya yinxalenye yewayini yejagi evela eCalifornia kwaye ifumaneka kwiwayini ezimhlophe ezisuka eMzantsi Afrika… kukwi-Loire Valley kuphela apho igama leVouvray lifikelela kwisakhono salo esipheleleyo - ukusuka kwintsimbi ukuya kwiswiti eyomeleleyo. Isilumkiso esincinci siyimfuneko: ukufumana iVouvray kwileyibhile akuqinisekisi ngeChenin Blanc elungileyo. Ukuthintela i-OOPS, khetha kwabona bavelisi babalaseleyo.
• 2019 Domaine Pinon, Vouvray, Sec. 100 ekhulwini Chenin Blanc
IVouvray yiwayini emhlophe ephuma kumdiliya waseChenin Blanc olinywa ecaleni komlambo iLoire kwisithili saseTouraine eFrance, kwimpuma yesixeko saseTours, kwidolophu yaseVouvray. I-Appellation d'Origine controlee (AOC) inikezelwe ngokukodwa kwi-Chenin Blanc, umdiliya ongacacanga nomncinci iArbois uvumelekile (kodwa awufane usetyenziswe).
Usuku lokugqibela lokuvuna iPINON kwi-30s
I-Viticulture inembali ende kule ndawo kwaye isukela emva kumaXesha Aphakathi (okanye ngaphambili) xa i
ICawa yamaKatolika yayiquka izidiliya kwimizi yoonongendi yasekuhlaleni. Lomdiliya waziwa ngokuba yi Pineau de la Loire kwaye inokuba usuka kwingingqi ye wayini yase Anjou nge 9th century wafudukela eVouvray.
Ngenkulungwane ye-16 neye-17 abarhwebi bamaDatshi babeka esweni ukutyalwa kwezidiliya kwindawo eza kusetyenziselwa urhwebo lwewayini kwiimarike zaseLondon, eParis naseRotterdam. Imidiliya esuka kwindawo yeTouraine yadityaniswa ibeyingxubevange ebhalwe njengeVouvray. Izisele zewayini zakhiwa kwimiqolomba edalwe ngokugrunjwa kwamatye e-tuffeau (limestone) athe asetyenziswa ukwakha iChateaux yaseLoire Valley. Iqondo lobushushu elibandayo, elizinzileyo leeseli lalilungele ukuqhubela phambili kwewayini ezihlwahlwazayo ezenziwe ngendlela yesiko le-champenoise system kwaye yaduma kwinkulungwane ye-18 kunye neye-19. IVouvray yaba yi-AOC ngo-1936 kwaye ibandakanya ilali yaseVouvray kunye neelali ezikufutshane ezisi-8 (Chancay, Nouzilly, Vernou-sur-Brenne and Rochecorbon).
Ummandla weVouvray ubekwe phezulu kwi-plateau, ehlulwe yimijelo emincinci kunye nemimandla yaseLoire. Imijelo inegalelo kwimeko yemozulu eyodwa ekhuthaza uphuhliso lomngundo wase Botrytis cinerea obangela ukubola okuncomekayo okusetyenziselwa ukuvelisa iwayini eziswiti zedizethi.
Imozulu ubukhulu becala ikwilizwekazi elinempembelelo ethile yaselwandle esuka kuLwandlekazi lweAtlantiki nangona ibekwe ngaphezu kweemayile ezili-100 ukuya entshona. Iwayini zixhomekeke kwimozulu ngotshintsho olubalulekileyo lwediliya nyaka ngamnye ngenxa yemozulu eguquguqukayo. Imozulu epholileyo yeminyaka itshintsha ubuninzi bemveliso isiya kwizitayile ezomileyo zewayini kuquka neVouvray ehlwahlwazayo. Imozulu eshushu iminyaka ikhuthaza imveliso yewayini eswiti, yedizethi.
Indawo esemantla kunye nemozulu epholileyo ngokwentelekiso yenza isivuno eVouvray ibe sesinye sezokugqibela ukugqityezelwa eFransi, ihlala iqhubeka ngoNovemba. Izitayile zeVouvray zisusela kowomileyo ukuya kwiswiti kwaye zisamenyezela kwaye ziphawulwe ngamavumba amnandi entyatyambo kunye nencasa ebukhali.
Imibala isukela kwingca ephakathi (yewayini ehlwahlwazayo) ukuya kutsho kumthubi ukuya kwigolide enzulu (kwiMoellex eswiti endala). Ngokubanzi, umda we-aromas kwicala elithambileyo elibukhali kwaye uthumele iingcebiso zepere, i-honeysuckle, i-quince kunye ne-apile (eluhlaza / etyheli) empumlweni. Kusenokubakho iingcebiso ezithambileyo zejinja kunye neenyosi (ecebisa ubukho bokubola okuncomekayo… cinga ngoSauterne). Incasa enkalakahla iqala ukubhitya, yomile kwaye ineminerality ukuya kwifruity kunye neswiti (kuxhomekeke kwisitayile).
I-Sec inikezela ngewayini eyomileyo (ngaphantsi kwe-8 g/L yeswekile eshiyekileyo; owona mahluko owomileyo weVouvray) kwaye idla ngokukhawuleza kwaye inike ubuncinci.
Izidiliya zePinon ziqatshelwa njengezona zintle kakhulu kwingingqi yaseVouvray kwaye ziphantsi kosapho ukusukela ngo-1786. UFrancois Pinon waqala umsebenzi wakhe njengengcali yengqondo yomntwana, ethatha ilifa kuyise (1987). I-Pinon ithathwa njengomenzi wewayini ozimiseleyo kwaye ugqaliselo lwakhe lukwi-organic viticulture kunye nongenelelo oluncinci ekwenzeni iwayini. Indawo okwangoku ilawulwa nguJulien Pinon.
Izidiliya zikwi Vallee de Cousse apho udongwe kunye nomhlaba wesilica ugqume isiseko selitye lekalika ngeflint (silex). I-Pinon ilandela inkqubo equka ukulima kwentsimi yediliya, ukuphepha izichumisi zekhemikhali kunye nezibulali zinambuzane kunye nokuvunwa ngesandla. Zonke izityalo ezitsha zenziwa ngokukhetha i-massale (ixesha lokukhula kwewayini yesiFrentshi ukuze kutyalwe ngokutsha izidiliya ezitsha ngokusikwa kwemidiliya emidala engaqhelekanga evela kwipropati enye okanye ebumelwaneni); akukho clones nursery zisetyenziswayo. Imidiliya yakhe iphakathi kwama-25 y/o. Le ndawo yaqinisekiswa ngokuba yinto ephilayo ngo-2011.
Ukubiliswa kotywala kwenzeka kwimigqomo yeplanga kwaye indala kwintsimbi engatyiwa okanye ifoudres (iibhokisi ezinkulu, eziphantse zibe kabini ubukhulu be-barrique Bordelaise) ukufikelela kwibhalansi phakathi kweziqhamo kunye nokunciphisa. Kukho irakhi enye yokususa iileyisi ezinzima kwaye iwayini isala kwi-fine lees yayo de kufakwe iibhotile, ezithatha iinyanga ezili-12 emva kokuvuna ukugqiba iwayini. UPinon uzihluza ngobunono iiwayini zakhe ukuqinisekisa ukuzinza kunye nokubanakho ukuguga.
I-Pinon ikhetha i-0.6 yeehektare zeendawo ezithambileyo, ezithe kratya ngodongwe ngakumbi kwiibhotile zayo zesek. Umdiliya uphakathi kweminyaka engama-40 ubudala. Isiqhamo sivunwa ngesandla, sihlelwa ngokungqongqo kwaye sicinezelwe iqela elipheleleyo. Ijusi iqukuqela ngomxhuzulane ukuya kwiitanki zokubilisa okuzenzekelayo kwegwele lemveli elihlala iinyanga ezi-2-3 ime ngokwendalo kwindawo ebandayo yasePinon ekrolwe kwinduli yetuffeau. Iwayini igugile kwi-fine lees yayo kangangeenyanga ezi-4-5 kumxube we-oki esetyenzisiweyo ukusuka kwi-500-litre oak demi-muids ukuya kwi-20-hectoliter foudres.
• Amanqaku e-Domaine Pinon ka-2019
Ibonisa i-eyellows kunye ne-apile etyheli empumlweni kunye neengcebiso ze-lemon zest kunye ne-orenji yamaxolo. Inkalakahla ifumanisa iziqhamo ezomelezwe zizinongo kunye nesitrasi. Ukugqitywa okude kuzisa ubuncinci obulungeleleneyo kwaye bucocwe. Idibanisa kakuhle ne-salmon kunye ne-tuna.
Funda iCandelo 1 apha: Ukufunda ngeewayini zaseLoire Valley ngeCawa yeNYC
Funda iCandelo 2 apha: Iiwayini zaseFransi: Eyona Mveliso imbi kakhulu ukusukela ngo-1970